Dowladda Somalia oo cambaareysay dowladda Sweden – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay iney cambaareyneyso faragelin ay sheegtay in dowladda Sweden ku heyso arrimaha gudaha boqortooyada Sacuudi Carabiya.
Wasiirka arrimaha debadda Sweden, Margot Wallström horraantii bishaan Maarso si kulul u dhaleeceysay nidaamka garsoorka ee Sacuudiga iyo heerka uu dalkaasi ka taagan yahay xuquuqda Aadanaha.
Dalal badan oo Carab ah ayaa ka carooday warka kasoo yeeray Sweden, iyadoo la ogyahay in nidaamka garsoorka Sacuudi Carabiya lagu dabaqo shareecada Islaamka, waxaana dhaleeceynnta haweeneydaas loo arkay mid xadgudub ku ah Islaamka.
“Dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa ay cambaaraynaysaa talaabada Wasaaradda Arrimaha dibadda ee dalka Sweden ku fara-gelinayso arimaha gudaha ee dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya” sida lagu sheegay Warsaxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha dibadda Soomaaliya.
“Hab dhaqankan waxaa uu mamnuuc ka yahay hanaanka iyo xeerarka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya wadamada kala madax banaan sida uu qabo xeerarka caalamiga ah” ayay tiri wasaaraddu.
“Ahmiyadda ugu horeysa ayaa ah in la xoshmeeyo madax banaanida iyo qaabka dowladda u sameynayso hanaankeeda dowladnimo iyadoo aan lagu sameynaynin wax fara gelin dibadda ah” ayay sidoo kale tiri wasaaradda Khaarijiyada Soomaaliya.
“Tani waa mabaadii’da aas aasiga oo caalamka uu xasaaniyad u ah, waan sida Soomaaliya ay rajaynaso in ay u dhaqmaan dhamaan wadamada xubnaha ka ah Bulshada caalamka” ayey wasaaraddu tiri.
Wasaaradda arrimaha debadda Soomaaliya oo sii hadashaya ayaa tiri “Diinteena Islaamka waa Diin barako waxayna dadka u keentay in ay ilaaliso sharafta iyo Xoriyadda dhamaan ilmaha Nabi Aadan”.
Warka kasoo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dunida Islaamka oo dhan looga fadhiyo iney ka dhiidhiyaan faragelinta Sweden eeysan arrintaasi u aallin dowladda iyo shacabka Sacuudiga oo kaliya.
Dhawaan ayay aheyd markii haweeneyda ah wasiirka arrimaha debadda Sweden, Margot Wallström ay dhaleeceysay nidaamnka xukunka iyo garsoorka Sacuudi Carabiya, waxaana arrintaas horay u cambaareeyey dalalka ku mideysan Iskaashiga Khaliijka.
Qaar ka mid ah dalalka Carabta ayaa danjirayaashii u fadhiyey Swedn dib ugu yeertay kadib markii Margot Wallström ay aad ay dhaleeceeysay boqortooyada Sacuudiga, xilli ay ka hor hadleysay baarlamaanka dalkeeda.
Lama oga in cambaareynta dowladda Soomaaliya ee reer Galbeedku taageero u jeedisay Sweden ay saameyn ku yeelan doonto xiriirka labada dal iyo inkale, iyadoo dalka Saweden uu safiir ugu magacaaban yahay Soomaaliya, kuna soo laalaabto Muqdisho.
Sacuudiga oo dad dhaawac ah ka qaaday Muqdisho